SundaySermons.online: June 2013
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 3:22 AM Links to this post
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 6:00 AM Links to this post
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သားသမီး (၄) ယောက်ရဲ့ ဖခင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင် မဖြစ်ခင်ကတော့ ဖခင်ဆိုတာ ကိုယ့်ကို စည်းကမ်းတွေနဲ့ အတင်းကျပ် ထားတဲ့သူ၊ အရိုက်ကြမ်းတဲ့သူ၊ အတင်းတွန်းတဲ့သူ ဆိုပြီး မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ချက်ပြုတ်၊ လျော်ဖွတ်၊ ပြုစုပေးတဲ့ အမေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် လိုက်ရင် အဖေ့ကို အမှတ် ပေးလို့မရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘခင်တစ်ဦး ဖြစ်လာပြီးတော့ သားသမီးတွေကို ကြည့်ရှုရင် ဖခင်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို နားလည်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီခံစားချက်ကလေးကို ကဗျာ တစ်ပုဒ်လို ချရေးလိုက်တယ်ဗျာ။ ကဗျာဆရာမဟုတ်လို့ အစဉ်မပြေနိုင်ပါဘူ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ခံစားချက် ကလေးတွေကို တော့ ချရေးချင်လို့ ဒီကဗျာလေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
မင်းကို လမ်းမှန်ကို ရောက်အောင်
သူခံစား ငိုကြွေးမှုတွေက ပိုများမယ့်သူဖြစ်တယ်။
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 4:26 PM Links to this post
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 10:42 AM Links to this post
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 3:31 AM Links to this post
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 3:57 PM Links to this post
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 6:38 AM Links to this post
ဒီရက်ပိုင်းအတွင် အလုပ်များနေတာကြောင့် စာရေးဘို့ ပျက်ကွက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီဘလောဂ်ကလေးကို အစဉ်အားပေး လာရောဖတ်ရှုတဲ့ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတွေကို အရမ်းအားနာမိပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာမရေးနိုင်ပေးမဲ့ နှုတ်ခပတ်တော်နဲ့ ခွန်အားယူနိုင်ဘို့ MP3 တရားဟောချက်ကလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ Handphone နဲ့ MP3 ပလေးယာ လေးတွေထဲမှာ ထဲ့ပြီး ဘစ်ကား စီးတဲ့အခါ၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါ၊ သွားလာရင်း နာထောင်နိုင်ဘို့ တရားဟောချက်ကလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတရားဟောချက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကိုးမိုင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော် မှာ ဝေငှတဲ့ တရားဟောချက် များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း အကြာကြီး ဆွဲစရာ မလိုအောင် ဖိုင်ဆိုက် သေးသေးလေး ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက် နှေးကွေးတဲ့ နေရာမှာတောင် ပြဿနာ မရှိအောင် ကြိုးစားပေးထားပါတယ်။
အားလုံးကျေနပ် ခွန်အားရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
Rev. Dr ပေါလ်ခေကျိုင်း၏ တရားဟောချက်
[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/95970067" params="" width=" 100%" height="166" iframe="true" /]
ဆရာ ဇော်ကိုမိုင်၏ တရားဟောချက်
[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/95969046" params="" width=" 100%" height="166" iframe="true" /]
Rev. မင်းလွင် ၏ တရားဟောချက်
[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/95981742" params="" width=" 100%" height="166" iframe="true" /]
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 6:06 AM Links to this post